China Dongshen borosy lafo volo voajanahary voajanahary volo bara resin mitantana tenanao manokana borosy niharatra ho an'ny fanalefahana volombava tarehy mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Dongshen borosy lafo volo voajanahary voajanahary volo bara resin mitana manokana marika borosy fiharatana ho nanalefaka volombava tarehy
Ny borosy fanaratsiana Dongshen dia vita tanana amin'ny volo badger voajanahary sy tantana resin voajanahary. Natao hanalefaka ny volombava alohan'ny aharatra, tsy misy mahasosotra ny hoditra. Tsy misy fihenan'ny volo, tsy misy fatiantoka tantanana, manala ny sakaizanao maharitra amin'ny fombafombam-bolo isan'andro. Ny loko sy ny marika manokana dia azo namboarina ihany koa.
Badger Deluxe Borosy fiharatana Ho an'ny Tompokolahy rehetra
Fitaovana fatotra Volo badger (volo badger madio)
Loko mitantana Manga, na fanamboarana araky ny fangatahan'ny mpanjifa
● Borosy vita tanana vita amin'ny volo badger 100% - Extra Dense koa. Borosy borosy lehilahy mahafinaritra, fa ny vehivavy kosa tia azy!
● Mamokatra volondavenona mahafinaritra miaraka amin'ny savony noharatanao tianao. Ny Premium Badger Hair dia badger madio tsy misy fangarony. ary ny fatotra borosinay vita tanana dia haharitra taona maro rehefa voakarakara tsara.
● Atsaharo tsara ilay borosy mba hampitomboana ny fiainana sy ny fahombiazan'ny borosy.
● Fanampiny tena tsara amin'ny Kitam-piharatra / Feharatra Famparatra.
Volo Badger madio
Ny borosy fiharatam-bolo madio dia matetika misy volo avy amin'ny badger. Miovaova amin'ny halemem-panahy ity volo ity, mazàna maizina kokoa ary ny lava-batany lava kokoa dia mahatonga azy io ho henjana kokoa noho ny volo hafa hafa. Na izany aza dia io ihany koa no fahita indrindra satria manarona ny faritra lehibe indrindra amin'ny vatan'ny badger izy io. Izany no antony mahatonga ny borosy fiharatana vita amin'ny volom-bava madio dia somary mora vidy kokoa noho ny badge tsara indrindra na silvertip.
Tsy misy manaratra toa ny dongshen - Efa 40 taona mahery i Dongshen no safidy mazava!
Teo aloha: Dongshen lafo vidy maimaim-poana habibiana fibre sentetika volo resin mitana fanao logo borosy tarehy volon-koditra
Manaraka: Dongshen borosy ambongadiny Blue Resin mitana maharitra volo mainty Badger volon-doha ho an'ny lehilahy
Loose Badger Hair
Miharatra borosy Custom
Dongshen KABUKI borosy tarehy premium vegan fibe ...
Dongshen makiazy borosy vegan namana malefaka synth ...
Dongshen marika manokana ambongadiny varahina maharitra ...
Dongshen ambongadiny makiazy maitso borosy ambony quali ...
borosy makiazy napetraka, Barber Shave, Mametraha makiazy borosy, Fitaovana borosy makiazy, Faritra fiharatra, Manaova borosy,